သေးငယ်သွယ်လျတဲ့ ခါး ရအောင် လိုက်နာနိုင်တဲ့နည်းများ…! - MyanmarMagazine
သေးငယ်သွယ်လျတဲ့ ခါး ရအောင် လိုက်နာနိုင်တဲ့နည်းများ…!
သေးငယ်ပြီးသွယ်လျတဲ့ ခါး တစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဟာ ဘာဝတ်ဝတ်သိသိသာသာကြီးကို လှနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေးငယ်တဲ့ခါးအလှရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
အတွက် ကိုယ်တွင်ြးွကက်သားရော အပြင်ြွကက်သားပါထိရောက်စေပါတယ်။
ကြမ်းပြင်မှာလက်ကိုတစ်တောင်ဖြင့်ထောက်ကာ ဘေးတစ်စောင်းလှဲပြီး အိပ်ထမတင်ပုံစံ
မျိုးပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။ ဘယ်ညာတစ်ဖက်ကိုတစ်လှည့်စီ တစ်ခါကိုအကြိမ် ၂ဝစီပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်ထမတင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာswiss ဘောလုံးကိုအကူပစ္စည်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမြန်ဆန်စေပြီး ဝိတ်ပါကျစေနိုင်တဲ့အတွက် တစ်မျိုးတည်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ကြိုးခုန်တဲ့အခါမှာလည်း ခါးကိုဟိုဘက်၊ ဒီဘက်လှည့်ပြီးပုံစံမျိုးစုံကစားပေးမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးလျှင်မြန်ထိရောက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်မှာပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကစားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ကြိမ်ကိုစက္ကန့် ၄၀ ခန့် ခပ်မြန်မြန်ပြုလုပ်ပေးပြီးမှ ၁၅ စက္ကန့်လောက်နားပေးပါ။ တစ်နေ့ကို နာရီဝက်လောက်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ ကယ်လိုရီများလောင်ကျွမ်းစေပြီး ခါးပတ်လည်မှအဆီများလည်းလျော့ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။
၃။ အလေးပြားသုံး၍ ခါးအောက်ပိုင်းပင့်တင်ပေးခြင်း
ဒီလှုပ်ရှားမှုကသင့်ရဲ့တင်အလှအတွက်သာမကခါးနောက်ကျောကြွက်သားတွေကိုပါကျစ်လစ်စေပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အလေးပြားကိုဗိုက်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးဒူးကိုကွေးကာ အိပ်ထမတင်ပုံစံမျိုး အသင့်အနေအထားနေပေးရပါမယ်။
တယ်။ တင်နှင့်ခါး တစ်လျောက် မြင့်နိုင်သလောက်မြှင့်တင် ပေးပြီး ခြေဖျားကိုထောက်ပေးရမှာပါ။ တစ်ခါလုပ်ရင် ၁၀ ကြိမ် မှ ၁၅ ကြိမ်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ ၆ ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ
၄။ ထောင့်မှန်ကျကျ တင်မြှင့်တင်ခြင်း
မဲ့ သိသာတဲ့အကျိုးရလာဒ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ အသေချာပါဘဲ။
စတင်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကျောကိုလှဲချပြီး အက္ခရာ L ပုံစံရအောင် သင့်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုတင်ပါးနဲ့အညီ် အပေါ်သို့မြှင့်တင်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း တင်ပါးနဲ့တစ်ထောက်ကွေးကြားမှာ ကွေးမနေဘဲဖြောင့်နေအောင်ထားရပါမယ်။ ဒီလို ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ် အထိတောက် လျောက်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ြွကက်သားတွေသန်မာစေရုံသာမက ခါးကိုသေးသွယ်ကျစ်လစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အဓိကခါးသေးဖို့ဆိုရင်တော့ ခါးလှည့်ကွင်းလေးတွေကိုလည်းမေ့ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးလေ။ ခါးလှည့်ကွင်းလေးတွေကိုနာရီဝက်လောက်ကစားပေးရုံနဲ့သင့်ရဲ့ကယ်လိုရီ၂ဝဝ လောက် လောင်ကျွမ်း
သွားမယ်ဆိုတာက မယုံနိုင်စရာတော့မရှိပါဘူး။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိဘဲ မိမိ အိမ်မှာပဲ
အလွယ်တကူနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆက်မပျက်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးအဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းကာကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်